केपी vs माधव : को बलियो, को दुब्लो ? | Ratopati
personअरुण बराल exploreकाठमाडौं access_timeभदौ ११, २०७८ chat_bubble_outline1
प्रस्तुत लेखमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेका सबलता, दुर्बलता, अवसर अनि चुनौती के–के छन् ? त्यस्तै माधव नेपालसँग के कस्ता सबलता, दुर्बलता, अवसर र चुनौतीहरु छन् ? यिनै विषयमा यहाँ चर्चा गरिनेछ । तर, एमालेका विभाजित दुई समूहबारे विश्लेषण गर्नुअघि अर्को एउटा ‘हाइपोथेटिकल’ प्रश्नमा बहस गर्न जरुरी देखिएको छ । र, यो प्रश्नचाहिँ SWOT एनालाइसिस भन्दा बाहिरको विषय हो ।
नेकपा एमाले विभाजित हुँदै गर्दा ओली पक्षका नेताले अक्सर के भन्ने गरेका छन् भने फुटेको पार्टीको भविश्य छैन । पूर्वमाले, शेरबहादुर देउवाले फुटाएको काँग्रेस प्रजातान्त्रिक वा माओवादीबाट फुटेका विभिन्न चोइटाहरुको दृष्टान्त दिँदै माधव नेपालको पनि भविश्य राम्रो नरहेको विश्लेषण एमालेको संस्थापन पक्षबाट हुँदै आएको यहाँ स्मरणीय छ । फुटेर जाने माधव नेपालहरुको भविश्य नै छैन त ? भविश्य जति सबै एमालेको पोल्टामा मात्रै आरक्षित छ त ? यस्तो ‘हाइपोथेटिकल’ विषयमा भविश्यवाणी गर्नु यो लेखको उद्देश्य होइन ।
यो लेखमा माधव नेपालको भविश्य राम्रो छ भनेर सिद्ध गर्न खोजिएको होइन । तर, हामीले माले–एमालेको पुरानो विभाजनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा लिँदैगर्दा प्रकृति र समाजको यो नियमलाई पनि ख्याल गर्न जरुरी छ कि इतिहास पुरानै तरिकाले हुबहु दोहोरिन्छ वा नयाँ तथ्य र परिघटनाका आधारमा नयाँ घटनाक्रम विकसित हुँदै जान्छ ? नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमलाई पुरानोकै पुनरावृत्तिका रुपमा सूत्रवद्ध गरेर हेर्नु विज्ञानसम्मत् दृष्टिकोण हो वा जडसूत्रवाद हो ?
फुटेको पार्टीको ऐतिहासिक स्कोर !
दशकौंसम्म लगातार सत्तारोहण गरेका पवन चाम्लिङलाई चुनौती दिने सिक्किममा न कुनै पार्टी थियो, न कुनै नेता । तर, २०१९ मा उनले आफैंबाट फुटेको एउटा चोइटो पार्टीसँग चुनाव हारे । र, सन् २०१९ देखि आफ्नै पूर्वकार्यकर्ता प्रेमसिंह तामाङ गोले सिक्किमको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । गोले नेतृत्वको ‘सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा’ सन् २०१३ मा पवन चाम्लिङको एसडीएफबाटै फुटेर बनेको हो, जसले स्थापनाको ६ वर्षपछि चुनावमार्फत् पवन चाम्लिङको पार्टीलाई विस्थापित गरिदियो । यसरी, सिक्किममा पटक–पटक फुटेको पार्टीले माऊ पार्टीलाई विस्थापित गरिदिएको रेकर्ड छ । चाहे नरबहादुर भण्डारीका पालामा होस्, चाहे पवन चाम्लिङका पालामा ।
नेपालमा प्रश्न उठ्छ– हामीले नेकपा मालेलाई मात्रै हेर्ने कि सिक्किमतिर पनि हेर्ने ? फ्रान्सका म्याक्रोन वा दिल्लीका केजरीवाललाई पनि हेर्ने कि देउवा नेतृत्वको काँग्रेस प्रजातान्त्रिकलाई मात्र हेर्ने ? राप्रपा र राप्रपा नेपाललाई पनि हेर्ने कि ? नेपालको उदाहरणमात्रै हेर्ने कि बाहिरको पनि हेर्ने ? पश्चिम बंगालका ज्योति बसुलाई हेर्ने कि आँखा चिम्लने ? नेपालकै उदाहरण हेर्दा पनि एमालेलाई मात्र हेर्ने कि प्रजापरिषदलाई पनि हेर्ने ? पुष्पलालको पार्टीलाई हेर्ने कि नहेर्ने ? विद्रोही झापाली समूह (माले) लाई हेर्ने कि नहेर्ने ? मोहनविक्रम सिंह र प्रचण्डको पार्टीलाई तुलना गर्ने कि नगर्ने ?
अब SWOT एनालाइसिस विधिबाट नेकपा एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विश्लेषण गरौं ।
नेकपा एमालेको विश्लेषण :
सबलता (Strength)–प्रथमतः केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको सबल पक्ष भनेको पार्टी विभाजन हुँदा नाम र चुनाव चिन्ह सुरक्षित हुनु हो । परिचित नाम र चुनाव चिन्हबाट भोट माग्ने एमालेलाई सुविधा छ ।
तेस्रो– एमालेसँग देशभरि बलियो र स्थापित संगठनको जालो छ । पार्टी फुटे पनि संघीय संसदमा एमाले नै सबैभन्दा ठूलो दल हो । संघीय संसदका १५४ सांसद ​ ( प्रतिनिधिसभाका १२१ र राष्ट्रियसभाका ३३ समेत) ​मध्ये ३४ जना (सनाखत नभएका ४ सहित) माधव नेपालको पार्टीमा लागेका छन् भने एमालेसँग अझै दुबै सदनमा १२० सांसद छन् । प्रदेशमा पनि विपक्षीकै रुपमा भए पनि एमालेको उपस्थिति बलियो छ । स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधिहरु छन् । देशैभरि कार्यकर्ता र सदस्यहरुको ठूलो संख्या छ । शिक्षक, कर्मचारीहरुको ठूलो पंक्ति एमालेसँग छ । एमालेलाई उच्च–मध्यम वर्गको बलियो साथ छ । सरकारमा हुँदा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति आदि कारणले राज्यका सबै निकायमा पार्टीको पहुँच छ । एमालेलाई राष्ट्रपतिको पनि साथ छ ।
छैंठौं– एमालेले विस्तारै दक्षिणपन्थी शक्तिहरुको पनि समर्थन पाउन थालेको अवस्था छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्ने अनि हिन्दुधर्म र एकल राष्ट्रवादको वकालत गर्ने जनमत पनि विस्तारै ओलीतर्फ आकर्षित हुन थालेको छ ।
र, सातौं– पछिल्लो समय माधव नेपाल समूहमा रहेको तेस्रो धारलाई पनि आफूसँगै ल्याएर ओली थप बलियो बनेका छन् । आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने कार्यसूची तय गरेको एमालेको अध्यक्ष पदमा ओलीलाई चुनौती दिने प्रतिपक्षी नेताको अभाव देखिएको छ । प्रस्तावित विधानले पनि ओलीलाई पार्टीभित्र थप शक्तिशाली बनाएको छ । समग्रमा भन्दाखेरि माधव नेपाल पक्ष पार्टीबाट बाहिरिए पनि एमाले कमजोर नहुने विश्वास सो पार्टीका नेताहरुमा विश्वास देखिएको छ, जुन एमालेको सबल पक्ष हो ।
कमजोरी (Weakness)– एमालेको पहिलो कमजोरी स्वयं केपी ओली नै हुन् । सामुहिक नेतृत्व नभएर व्यक्ति सर्वेसर्बा भएकाले ओलीले गल्ती गर्दा सिंगै पार्टीलाई क्षति पुगेको छ । सामुहिक निर्णयमा चलेको भए दुईचोटि संसद विघटन हुने थिएन र पार्टीलाई यति धेरै क्षति, यतिधेरै बदनामी हुने थिएन । त्यसैले, ओलीको व्यक्तिवाद र सामुहिक लिडरसिपको अभाव एमालेको पहिलो कमजोरी हो ।
चौथो – एमालेको अर्को कमजोरी भनेको गुटबन्दी र पार्टी विभाजन हो । पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन नसक्नु एमालेको ठूलो कमजोरी हो । संगठन सञ्चालनका हिसाबले ओली ‘होमोजिनियस’ विचारका पक्षपाती हुन् । उनी गुटका प्रवर्तक हुन् । विपक्षीविहीन पार्टी ओलीको परिकल्पना र चाहना हो । तर, यस्तो परिकल्पनाले गुट बनाउन सकिन्छ, पार्टी बनाउन सकिँदैन । यस्तो ‘एकमनावादी’ कमजोरीका कारण एमालेभित्र फेरि गुटबन्दी मौलाउन सक्छ । किनभने, अहिले पनि एमालेमा ‘पूर्वमाधव नेपाल समूह’ र ‘पूर्वमाओवादी समूह’ बाँकी नै छन् । पूर्वमाओवादीले पार्टीभित्र भाग खोज्ने र पूर्वमाधव समूहले राजनीतिमा ‘स्पेस’ खोज्ने परिस्थितमा ओलीले के गर्लान् ? ओलीको कमजोरी फेरि पनि यहीँनेर प्रकट हुन सक्छ ।
देउवा सरकारको अलोकप्रियतालाई क्यास गर्ने मामिलामा त एमाले नेताहरु लाग्लान्, तर उनीहरुले काँग्रेससँग गठबन्धन बनाएका वामपन्थी दललाई आगामी चुनावसम्म आफ्नो नजिक ल्याउलान् त ? दोस्रो प्रश्नलाई उनीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् भने एकमना पार्टी बनाएरै बहुमत जुटाउने दुस्साहसतर्फ लाग्नुबाहेक अर्को विकल्प एमालेसँग छैन, जुन निकै नै चुनौतीपूर्ण छ । किनभने, एमाले अहिले चुनौतीको घेराबन्दीमा परेको पार्टी हो ।
चुनौती (Threat Analysis) –
सबलता (Strength)–नेकपा एमालेका पूर्वमहासचिव, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा निवर्तमान बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले २०३ मध्ये ५५ जना केन्द्रीय सदस्यहरु र १५४ मध्ये ३४ जना सांसद (सनाखत नभएका ४ सहित) लिएर भदौ ९ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छन् । संसदमा उपस्थितिका हिसाबले एकीकृत समाजवादी पार्टी चौथो शक्ति बनेको छ, जुन किनारामा पारिएका विद्रोही एमाले नेताहरुको पहिलो सफलता हो । माधव नेपालको पहिलो सबल पक्ष भनेको अब उनीसँग आफ्नै नेतृत्वमा र विचारमा अघि बढ्न सक्ने पार्टी छ ।
कमजोरी (Weakness)– माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै यो चिचिलो पार्टी हो । चिचिलोलाई अरुले निमोठिदिने सम्भावना हुन्छ । भोलि अदालतमा मुद्दा हालेर वा नकारात्मक प्रचार गरेर यो पार्टीलाई विपक्षीले सिध्याइदिने सम्भावना रहन्छ । पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह नयाँ भएकाले जनतामा परिचित हुन सकेको अवस्था छैन । साथै यो पार्टीले एमालेसँग अलग हुनुपर्ने कारण केपी ओलीको दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई बताए पनि वैचारिक–राजनीतिक भिन्नताहरु प्रष्ट पार्न भ्याएको वा सकेको छैन । आफ्नो सिद्धान्त मदन भण्डारीको जबज नै रहने बताएको छ । जनतामा एमालेभन्दा फरक देखाउन नसक्नु वा नभ्याउनु यो पार्टीको कमजोर पक्ष हो ।
लामो समयसम्म आफूसँग रहेका तेस्रोधारका नेताहरुलाई माधव नेपालले आफूसँग राख्न सकेनन् । यो माधव नेपालको दोस्रो कमजोरी हो । हिजो नेकपा सिंगै भएका बेला निर्वाचन आयोगमा भएको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा केपी ओली अल्पमतमा परेको अवस्थामा सूर्य चिन्ह र एमालेको नाममा बढी आशक्ति नदेखाएर चाँडै दाबी प्रस्तुत गरेको भए पार्टीले त्यसबेलै बैधानिकता पाउन सक्थ्यो र अहिले सिंगो नेकपा (ओलीबाहेक) एकै ठाउँ हुन सक्थ्यो । किनभने, त्यसबेला नेकपामा माधव समूहसँग संसद र केन्द्रीय कमिटी दुबै ठाउँमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या थियो । तर, त्यतिबेला माधव नेपालले सूर्यचिन्हको लोभमा कमजोरी गरे । अथवा उनी मध्यमार्गी नेताहरुको कुरा सुनेर अलमलमा परे ।
अवसर (Opportunity) –मूलतः नेकपा एमालेभित्र जुन प्रकारको वैचारिक र संगठनात्मक समस्या छ, त्यसलाई क्यास गरेको खण्डमा नयाँ पार्टी निर्माणका लागि माधव नेपालले अवसर पाउन पनि सक्छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका कारण जनता समाजवादी पार्टी केही सुविधाजनक अवस्थामा छ ।
चुनौती (Threat Analysis) –माधव नेपाल नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेकपा एमाले हो । अब नयाँ पार्टीलाई केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा आधार दिनका लागि अब उसले जतासुकै एमालेको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो माधव नेपालको समूहमा बस्न तयार भएका नेता कार्यकर्ताहरु एमाले नै छाडेर नयाँ पार्टीमा जान हिच्काइरहेको देखिन्छ, जुन माधव नेपालका सामुन्ने उत्पन्न मुख्य चुनौती हो । नेता नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने आँट त गरेका छन्, तर यो आँटलाई कार्यकर्ताहरुले साथ दिएनन् भने ‘आँट सिद्धान्त’ले मात्रै शक्ति आर्जन हुन सक्दैन । त्यसैले नयाँ पार्टी निर्माण गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण काम हो ।’ नयाँ पार्टी बनाउँदै गर्दा माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले
प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वा उपेन्द्र–बाबुराम नेतृत्वको जसपासँग पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ माधव नेपालले दिन सकेका छैनन् । नयाँ पार्टीको सिद्धान्त जबज नै भनिएको हुनाले प्रचण्डहरुसँग एकताको सम्भावना तत्काल देखिँदैन । तर, माओवादीहरु चाहिँ माधव नेपाललाई ‘कोप्ट’ गर्न लालायित देखिन्छन् । उता, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्– हामीले कम्युनिस्ट छाडिसक्यौं, हामीसँग पार्टी एकता गर्नेभए कम्युनिस्ट पार्टी भन्न छाड्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीको स्पेस कहाँनेर हो ? एमाले, माओवादी वा जसपाभन्दा अलग्गै वामपन्थी पार्टीको स्थान कहाँनेर रहन्छ ? यसबारे प्रष्ट्याउनुपर्ने चुनौती एकीकृत समाजवादीको काँधमा छ ।
Aug. 28, 2021, 10:14 a.m. सचेत नेपाली
प्रचण्ड र देउवा स‌ग मिली, अाफ्नै पार्टीकाे बहुमत भएकाे सरकार गिराउन गद्दारी भूमिका खेलेका माधव नेपाललाइ इतिहासले समेत माफि गर्नेवाला छैन । केपीलाइ विभिन्न अाराेप लगाउन प्रचण्डलाइ सहयाेग गर्ने, कारवाही गरी पार्टी सदस्य र अध्यक्षबाट नै हटाउने, प्रधानमन्त्री र राष्ट्पतिलाइ महाअभियाेग लगाएर के पी लाइ भित्तैमा पुर्याइदिने, जस्ता पार्टी गद्दारी काम गरेकाे हुनाले माधव नेपालकाे पार्टी कहिल्यै राम्राे पार्टी हुन सक्दैन । सिदान्त नमिल्ने दलस‌गकाे गठबन्धनकाे कारणले कतिवेर गठबन्धन भत्किन्छ भन्न सकिदैन । एक महिना भन्दा बढि भैसक्दा पनि देशले मन्त्रिहरु नपाउनु यसै गठबन्धकाे विग्रदाे उदाहरण हैन भन्न सकिन्न ।